အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးဒေသထွက် ဝါးထည်ပစ္စည်းများ တရုတ်နယ်စပ်မှ ဝယ်ယူမှုများပြား - Yangon Media Group
အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးဒေသထွက် ဝါးထည်ပစ္စည်းများ တရုတ်နယ်စပ်မှ ဝယ်ယူမှုများပြား
အင်းတော်၊ ဇန်နဝါရီ ၄- စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သည့် သဘာဝဝါးပင်မှ ထုတ်လုပ်သော ဝါးထည်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များကို ဒီဇင်ဘာလဆန်း ခရစ္စမတ် ရာသီမှအစပြု၍ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်မြို့များနှင့် တရုတ်နယ်စပ်မှ အများအပြား ဝယ်ယူလျက်ရှိရာ မော်လူးရွာထွက် ဝါးထည်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များအရောင်းသွက်လျက်ရှိကြောင်း မော်လူးရွာမှ ဒေသခံကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးဦးညိုမင်းထက်က ဇန်န ဝါရီ ၃ ရက်ကပြောသည်။
အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူး ကျေးရွာဝါးထည်လုပ်ငန်းမှ ရှေး ယခင်ကစတင်၍ ဒေသရိုးရာလုပ် ငန်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး မော်လူးရွာထွက်ပစ္စည်း များကို ယခင်က မန္တလေး၊ ရွှေဘို မြို့များသို့ အများဆုံးတင်ပို့ရောင်း ချခဲ့ကြောင်း ¤င်းကပြောသည်။
”အခု ဒီဘက်ဆယ်စုနှစ်တွေ မှာ ကျွန်တော်တို့မော်လူးရွာထွက် ဝါးထည်ပစ္စည်းတွေကို တရုတ်နယ်စပ်ကပဲ၊ အများဆုံးဝယ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေး၊ ရွှေဘိုဈေး ကွက်တွေက အခုဒီဘက်နှစ်တွေ မှာ ဝယ်ယူမှုနည်းသွားတယ်။ ပ လတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေအစားထိုး ဝင်ရောက်မှုများတာလည်း တစ် ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်”ဟု မော်လူးဒေ သခံ ဝါးထည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ဒေါ်တင်တင်ကပြောသည်။
မော်လူးရွာတွင် ယခင်အနှစ် ငါးဆယ်ကျော်ကာလက အိမ်တိုင်း လုပ်ကိုင်သော်လည်း ဝါးထည်ပစ္စည်း ဈေးကွက်အရ မြန်မာနိုင်ငံပြည် တွင်းဈေးကွက်များက ဝယ်ယူမှု နည်းပါးလာသည့်အတွက် ဝါးထည် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ ဦးရေလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်နည်းပါးလာ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နယ်စပ်သို့ ပေါင်းအိုး ကြီးများ၊ လွယ်ပလိုင်းအကြီးအသေး မျိုးစုံ၊ ဆေးရောင်ခြယ်တရုတ်ခမောက် အချောအကြီးအသေးမျိုးစုံ၊ ဝါးနှီး ကုလားထိုင်အခင်းများ၊ အဝတ်ထည့် ခြင်း၊ အမှိုက်ထည့်ခြင်းများ ရက်လုပ် ရောင်းချကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကုန် ကြမ်းက ဝါးပါပဲ။ အခုတော့ ကုမ္ပဏီ တွေက ဝါးထုတ်လုပ်မှုများပြားလာ တဲ့အတွက် ဝါးတောတွေ နည်းပါး လာတယ်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်က ဝယ်ယူမှုနည်းတော့ တရုတ်နယ်စပ် ဈေးကွက်ကိုပဲ အားထားလုပ်ကိုင် နေရပါတယ်”ဟု မော်လူးဒေသခံ ဦးအောင်ဘကပြောသည်။
ဟာသသရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေးအသတ်ခံရမှု သံသယရှိသူသုံးဦးကို မိဘများက ရဲစခန်းသို့လာအပ်
စစ်ရှောင်ပြည်သူ သုံးသောင်းခွဲကျော်ကို နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ နိုင်ငံ ၁၇ နိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်??
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့် တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီး?
မြစ်ကြီးနား ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင် ငွေကျပ်သိန်း ၉၂ဝ ခန့် ဓားပြတိုက်ခံရ